Dhawunirodha mapepanhau nemagazini kuMhando yako mumasekondi asingasviki makumi matatu uye zvemahara | MaReaders ese
Dhawunirodha mapepanhau nemagazini kuMhando yako mumasekondi asingasviki makumi matatu uye mahara
Villamandos | | Amazon Kindle, Software, Kindle tutorials
Kana iwe uri mumwe wevanhu ivavo vanoda kuziviswa kanenge zvachose, nhasi ndiri kuzokuratidza a dzidziso diki yaungavonga nayo kuna kurodha pasi huru nhamba yemapepanhau nemagazini zvinopihwa mahara uye kuti iwe unogona kudhawunirodha kuAmazon Kindle mumasekondi asingasviki makumi matatu.
Maitiro ese aya anogona kuitwa kubva kusevhisi Reader Dailies (http://www.readerdailies.com) iyo yatinofanirwa kuwana kutanga iyi dzidziso.
Kubva panguva ino zvichienda mberi, iwe unongofanirwa kutevedzera nhanho dzakaratidzwa mumifananidzo, zvakare kusendama pavari kuti uwane mapepanhau kana magazini aunofarira pane yako Kindle mudziyo wakagadzirira kuverenga mumasekondi mashoma:
Kutanga enda kune iyo Reader Dailies webhusaiti (http://www.readerdailies.com), kwaunozoona skrini yakafanana neiya inoratidzwa mumufananidzo.
Iye zvino kubva muchikamu chakanzi «Sarudza iwe unofarira neww mawebhusaiti» Unogona kusarudza mamwe mapepanhau kana magazini akaratidzirwa, asi kuti uwane tsvakiridzo yakanyanya unofanirwa kuenda kunjini yekutsvaga yatinozowana nekudzvanya pane zvinyorwa zvakaiswa mumufananidzo.
Mune ino nhanho isu tinongofanirwa kutsvaga iro pepanhau kana magazini yatinoda kurodha pasi kuMhando yedu uye kumirira mhinduro dzekutsvaga.
Kana tangowanikwa isu tinogona kana dhawunirodha iyo .mobi faira kuti gare gare isu tichafanirwa kuchinjira kune yedu Kindle kuburikidza, semuenzaniso, komputa yedu kana nekuitumira kune yedu Kindle neyatove inozivikanwa sarudzo «Tumirai kuMhando yangu».
Paunenge uchinge wasvika pano uye kana waita nhanho dzose nemazvo, mapepanhau kana magazini awakatumira kana kusevha paMhando yako anofanira kunge ave kushanda kubva kuAmazon mudziyo.
Wakawana here chidzidzo ichi chichibatsira uye wakakwanisa here kurodha mapepanhau kana magazini aunofarira kuMhando yako pasina kunetseka zvakanyanya?.
Mamwe mashoko - Dzidziso: Dhawunirodha maBooks kune yako Kindle pasina kudiwa kweWiFi yekubatanidza
Kunobva - www.vaperempire.com
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » makambani » Amazon Kindle » Dhawunirodha mapepanhau nemagazini kuMhando yako mumasekondi asingasviki makumi matatu uye mahara
Iwo akanakisa maReaders
Tora mukana iwoyo uye uwane mamwe emaReaders akanakisa pamusika nemitengo inoyevedza
Dzidziso inobatsira kwazvo, ndatenda! Dambudziko rakafanana nekugara ... kuverenga magazini uye / kana pepanhau na6 ″ hakuna kusununguka. Zvakare unoda ruvara kuti uone iwo mafoto. Ini ndinofungidzira kana zvichibatsira kune Kindle Moto.
Unogamuchirwa, ndosaka tiri pano !!.
Murume wemapepanhau ini handizvione zvakashata ehh, ndakazviedza uye hazvina kufanana nekuzviverenga pahwendefa asi zvakanaka kwazvo 🙂
Ndichazviedza!… Kana ini ndawana yangu Kindle Paperwhite 🙂
Izvo hazvitenderi vanhu vazhinji kunyoresa: S
Sony Reader PRS-T3 VS Sony Reader PRS-T2, duel yehama
Dzidziso: Dhawunirodha maBooks kune yako Kindle pasina kudiwa kweWiFi yekubatanidza
Yemahara Amazon Inonzwika Trial: 90.000+ audiobooks